Fikarohana momba ny firaisana Kramer avy any Seinfeld Nambarany ho teraka indray ao amin'ny vatana ara-batana ara-batana lehibe, Buster Keaton: fiainana niainan'i Michael Richards sy Jerry Seinfeld - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Michael Richards Reincarnation Case natolotry ny: Walter Semkiw, MD
Fiainana taloha ho an'i Jerry Seinfeld
Ny andian-tantara amin'ny fahitalavitra Seinfeld dia iray amin'ireo fampisehoana tena tiako indrindra. Vao haingana dia navoaka tao amin'ny tranokalantsika i Jerry Seinfeld nandritra ny androm-piainany, ary i Jerry Thompson Ford no mpanoratra mpanoratra tantara an-tsehatra, izay niafara tamin'ny farany. Ford Theatre, izay nitifiran'i Abraham Lincoln. Mba hamerenana ity tranga ity, azafady mankany:
John Thompson Ford Jerry Seinfeld Revelarnation
Michael Richards, Kramer, ho teraka tamin'ny fanamboarana ny bater Keaton
Kramer, kilalao avy amin'i Michael Richards, dia toetra tena tiako indrindra Seinfeld seho noho ny fanomezany noho ny hatsikana amin'ny vatana. Nisy fotoana aho nahatsapa fa ny an'i Michael slapstick Ny style comedy sy ny endriky ny endrika dia mifanaraka amin'ny an'ny Buster Keaton.
Nandritra ny fotoam-pivoriana iray niaraka tamin'i Kevin Ryerson, mpanelanelana amin'ny laonin'izao tontolo izao, Ahtun Re, fanahy iray izay naneho ny fahaizany manao reincarnation match miaraka amina fahamarinana marim-pototra, dia nanamafy fa i Michael Richards dia nanana fiainana taloha ho Buster Keaton.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny endriky ny endriky ny Buster Keaton sy Michael Richards dia tena mitovy.
Ny fiainany taloha, talenta sy fihetsika: Michael Richards no manintona ny filalaon'ny hatsikana ara-panatanjahantena aty Buster Keaton
Ny fihenam-bidy: Buster Keaton dia maty tamin'ny 1966, raha Michael Richards kosa teraka tamin'ny 1949, izay midika fa nifandona nandritra ny 17 taona teo ho eo ny androm-piainany. Toy izany, io dia maneho tranga fahatongavan'ny nofo nofo, izay amam-panahy aina mihoatra ny iray amin'ny fotoana iray. Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia, tao anatin'ny andiany 1500 nanamarina ireo tranga fitadidiana fiainana taloha, dia nitatitra an'io trangan-javatra io ihany koa, izay nantsoiny hoe "tranga misy daty tsy ara-dalàna," satria nifandona nandritra ny androm-piainana. Raha hijery ireo tranga ireo dia kitiho ny rohy Split Incarnation voalaza etsy ambony.
Ny iray amin'ireo sora-baventy voavetaveta farany indrindra dia azo jerena ao amin'ny pejy manaraka:
Trangam-panjakan'izao tontolo izao any Helmut Kohler | Ruprecht Schultz